नेता विष्णु रिजाल भन्नुहुन्छ : प्रचण्डले साथ नदिएको भए न विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, न ओली प्रधानमन्त्री ! – yuwa Awaj
नेता विष्णु रिजाल भन्नुहुन्छ : प्रचण्डले साथ नदिएको भए न विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, न ओली प्रधानमन्त्री !
कार्तिक ३०, २०७७ आइतबार 7
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पदलोलुप भनेको नसुहाउने तर्क गरेका छन् ।
पार्टीभित्र आन्तरिक वि’वाद च’र्किरहेको बेलामा नेता रिजालको यस्तो भनाई आएको हो । हिजोको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरुले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विट’रमार्फत नेता रिजालले लेखेका छन्,”अरु तर्क गर्न सकिएला, प्रचण्डलाई ‘प’दलोलुप’ भनेको सुहाउँदैन । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा स्वीकार नगरेर पार्टी एकता अघि बढाउने र आधा कार्यकालको लिखित
सहमतिलाई बीचैमा छाडिदिने व्यक्तिलाई पदलोलुप कसरी भन्न मिल्ला र ? ख्याल गरौँ– प्रचण्डले साथ नदिएको न विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, न केपी ओली प्रधानमन्त्री । यति नभइसकेपछि अरु साथीहरुले रोजी–खोजी विभिन्न पद पाउने त सम्भावनै हुन्थेन । त्यसैले जसको सहयोगमा आफू पदमा बसिरहेको छ, उसैलाई ‘पदलो’लुप’को आ’रोप लगाउँदा लोकले पत्याउला र ?”
Prevसूर्य थापा भन्नुहुन्छ : प्रचण्डको प्रस्ताव अराजनीतिक हो, फिर्ता नगरे नेकपाको कुनै तहको बैठक हुँदैन !
Nextकुलमानलाई ‘हिरो’ बनाएको त्यो लक्ष्मी पूजा, जहाँबाट सुरु भयो लोडशेडिङमुक्त नेपाल…हेर्नुहोस् ।